China China phase metaly elektronika metatra meter ic card） mpanamboatra sy mpamatsy | famonjena
Mirefy herinaratra herinaratra tokana (karatra IC) dia famokarana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay araka ny fepetra ara-teknikan'ny GB / T17215.321-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
1.Flame retardant, mora apetraka
4. Ny metaly angovo dia manana fiasan'ny tarif maro isan-karazany (tahan'ny fatra)
5. Fomba fanaraha-maso ny karaman'ny karatra IC eo an-toerana
2. fanaraha-maso ny sarany karatra
4.High-marim-pototra, fahatsapan-tena avo lenta, fiarovana ambony, kelikely, ambany tsiro fitokan-tena mitokana
5.Hit-fahamarinan-tena, sakelon'ny manganese-varahina miaraka amina loaka ankehitriny
6. Toerana fampiasa: vondrom-piarahamonina, hotely, trano fivarotana lehibe, fananganana birao, sekoly, fananana, sns
7.Ny refy amin'ny firafitry ny raharaha dia mitovy, tsara sy lafo apetraka.
8. Ampiasao karatra CPU / SD karatra
9.Fampahalalana momba an-tsary: ​​ny fanjifana herinaratra mitombo mandritra ny volana sy ny volana lasa teo, ny mari-pamantarana herinaratra ho an'ny herinaratra sy ny sandan'ny fanamafisana ny angovo herinaratra, daty sy ora ankehitriny, code na fampandrenesana fanairana, fampakarana ny fifandraisan-davitra, laharana metatra herin'ny herinaratra. etc.
10.Main function: fepetra fanamafisana ny fanamafisana ny fiarovana, ny firaketana an-tsoratra ny hetsika, ny rafitra matevina, ny fantsona tsara
11. fomba fifandraisana: RS485, inframerahera,
12.Mampiasa miorina ho fampitaovana enta-mavesatra. Ny tombony: rafitra tsotra sy ny vidiny mora.
Ny fanombatombana ankehitriny 5(20), 5(60),10(40),15(60)A
Haavo voamarina Antony mavitrika 1, haavo 2 maditra
Fanjifana herinaratra Tsipika fambara: <= 1.5W, 10VA; andalana ankehitriny: <1VA
Laharam-panetrentena 40%~60%, ny hamandoana eo akaikin'ny asa dia voafehy ao anatin'ny 95%
Amboary ny vata herinaratra amin'ny boaty metatra, ary ampifandraiso ny interface tsara arakaraka ny sary an-tariby. Entina ny mampiasa tariby varahina na terminal halimo. Ny kofehy amin'ny vata fitaterana dia tokony hikatona mba tsy handoro noho ny tsy fahampian'ny fifandraisana na ny tariby manify loatra.
Previous: Metatra angovo herinaratra tokana module remote + module）
Manaraka: 3Phase metatra angovo azo antoka (carte de ic)
Meter Kwh Dingana tokana
Volavolan-tsasam-peo nomerika tokana
Fiandohan'ny herinaratra elektrika tokana
metatra angovo metatra
Solika tokana natokana ho an'ny herinaratra
Kwh Meter tokana tokana
Dingana roa an-tariby Kwh Meter
Métera Power-Phase Power
Kase Metrika tokana manerantany